Ukuhlobisa ifulethi loNyaka Omusha ungenziwa ngokusebenzisa izinto ezilula. Siyakunikisela ukukhethwa kwemibono emihle kanye namakilasi enhle ekwakheni izihlahla zaseKhisimusi zangaphakathi ezivela ephepheni elonakele. Ekudalweni kwezobuciko, uzothatha isikhathi esincane kakhulu, futhi izinkumbulo ezenziwe ngomumo zizoba umhlobiso omuhle kakhulu wezangaphakathi noma izipho zabathandekayo. Ungenza kanjani umuthi wephepha elibolile ngezandla zakho? Sikunikeza imibono eyithakazelisayo.
Yiziphi izinto ezizodingwa kulesi sikhungo?
Ngaphambi kokuba uqale ukwakha, qiniseka ukuthi unakho konke okudingayo. Ukuze wenze lo mshini, uzodinga amakhadibhodi nephepha eliboshiwe, i-glue, i-tape yokunamathisela, i-stapler enezinhlamvu, kanye nezinye izinto ezihlobisa umhlobiso. Kungaba ubuhlalu bemibala ehlukahlukene namasayizi, ama-sequin, izingcezu ze-tinsel nemvula. Ungazama ukugqoka isihlahla sikaKhisimusi nokuthile okungewona okujwayelekile: okwenziwa ngokukhethekile ngamathoyizi akhe amancane, amathrekhi, izinkinobho ezifakiwe. Indaba esemqoka yiphepha elonakele. Ithengiswa ezitolo zokubhala. Kungashintshwa ngephepha lephepha lephepha lokubeka ithebula noma iphakheji elifanayo lemaswidi. Lapho zonke izinto ziqoqiwe, umbuzo oyinhloko uvela: kanjani ukwenza umuthi wephepha elibiziwe?
Imibono yokudala kwezingane
Uma unesikhathi esincane kakhulu, noma unqume ukwenza i-original eyenziwe ngesandla ngesandla nezingane, sikunikeza iklasi elihle ekudalweni komuthi wesiKhisimusi olula:
Yenza isigqoko sekhadibhodi yesayizi edingekayo.
Ukumboza ngephepha elibolile lombala oluhlaza bese ulilungisa. Kakade kulesi sigaba isihlahla sikaKhisimusi singahlotshiswe ngezigcawu - glue amabhande amaningana we-ribbon ekhanyayo noma iphepha elimibalabala, omunye wabo uyosiza ukufihla indawo yokujoyina ishidi elibeka phansi.
Yenza umuthi ungaba mnandi kakhulu uma ufaka amazinga ambalwa kuwo. Ukwenza lokhu, unqume imidwebo yephepha elivuthiwe elisetshenziselwa ukuhlobisa kwesisekelo. Ngakolunye uhlangothi lwengenalutho engenalutho, yenza izincazelo, uphendule umhlubu ube yintambo. Manje glue lesi sici ku-cone ukuze sizungeze isihlahla ngokuzungezile. Yenza amathrekhi amaningana anjalo, emva kwalokho ungaqala ukuhlobisa umkhiqizo.
Umbono othakazelisayo: Umuthi kaKhisimusi uzophuma kakhulu, uma uwusondeza ngezingxenyana ezingezansi zephepha elibheke kulo lonke ukuphakama.
Umkhiqizo wepop-poms iphepha
Siyakubonisa indlela eyodwa eyithakazelisayo yokwenza umuthi kaKhisimusi kusuka ephepheni elonakele:
Yenza okungenalutho kwekhadibhodi ngesimo se-cone ngendlela efanayo ne-craft yangaphambilini.
Iphepha eligwetshiwe lihlukaniswa libe yi-2 cm ubude nobude obuyi-20 cm.
Kusukela emivundeni sakha amapompomp izimbali. Ukuze udale, itheyipu kufanele ilandwe ku-accordion iphinde ibekwe eduze komkhawulo owodwa. Ukuqoqa eziningi zalezi pompom noma izimbali.
Indlela yokwenza umuthi kaKhisimusi kusuka ephepheni elonakele ngale ndlela? Kulula kakhulu: ne-pompons ilungile, gcoba i-cone ingenalutho. Beka izakhi zephepha ezonakele ngokubambisana ndawonye ukuze izinto eziyisisekelo zingabambeki. Umkhiqizo oqedile awudingi noma yikuphi ukuhlobisa okungeziwe, kodwa ungakwenza ube mnandi nakakhulu uma unamathele ubuhlalu, ubuchopho noma imicibisholo eyenziwe ngamathebulethi akhanyayo.
Isihlahla somnyaka omusha omuhle kakhulu singenziwa kusuka emaphethini wephepha. Angazi kanjani ukudala izimbali ezinjalo, ukwenza kanjani umuthi wephepha elibolile? Isinyathelo ngesinyathelo sichaza inqubo yokwakha ubuciko ngokukhethekile kuwe:
Kusukela ephepheni elonakele, nciphise i-ribhoni 4 cm ububanzi.
Yifake engxenyeni, qala ukuhlanekezela umdwebo, udonsa emaphethelweni kancane, udale i-rose.
Imbali izoba i-nicer uma izikhala zomuntu ngamunye zethulwe ngokuzenzekelayo, kunokuba zibekwe izingqimba. Rose kudingeka kwenziwe okuningi kakhulu.
Ngokuhlukanisa wenze ikhamera yekhadibhodi bese uyihlanganisa ngezikhala ezimbali.
Ikakhulukazi yokuqala, izihlahla ezinjalo zikaKhisimusi zibukeka, uma uzenza kusuka ephepheni elikhanyayo. Zama ukwenza umuthi obomvu noma obomvu. Ukwengezwa komuthi wesihlahla sikaKhisimusi akudingi, kodwa ungakwazi njalo ukungeza kancane kancane noma ezinye izinto ezincane zokuhlobisa.
Iphepha elixubile liyizinto ezilula ukuyifanekisela, ukunikeza ukubunjwa okungavamile kakhulu. Sinikeza umqondo owodwa owodwa othakazelisayo ngobuciko, ositshela indlela yokwenza umuthi owenziwe ngephepha elibiziwe.
Ngakho-ke, sizoqoqa isihlahla sonyaka omusha kusuka emaceleni amancane ahlukile. Ake siqale, njalonjalo, ngokukhiqiza kwabo. Ngalokhu, leli phepha lihlukaniswa libe yizingalo eziyi-10 cm nobude buka 2.5 cm. Sithatha isandla esisodwa bese sisiphakamisa phakathi. Gcwalisa umsebenzi wokusebenza. Kufanele uthole iqabunga ngetiphu elibukhali. Siqala ukuqoqa ikhamera yekhadibhodi ngezinto ezinjalo ezivela ngezansi. Kuyinto elula kakhulu ukufaka izintambo ku-tape scotch. Qala umugqa wesibili ngokubeka izinto ezenziwe ngokuhlelekile. Ngokufanayo, ukuhlobisa umuthi wonke. Phezulu kwesihlahla esinjalo, ungabamba inkanyezi yekhadibhodi noma umnsalo omkhulu.
Okungaqondakali namuhla namuhla izipho ezivela kumaswidi. Eqinisweni, akunzima ukwenza umuthi kaKhisimusi ngezandla zakhe ezenziwe ngephepha elibiziwe ne-confectionery. Khetha ama-candies ezinhlakeni ezikhanyayo, ezifana namathoyizi omnyaka omusha. Njengesizathu sokwemikhumbi, yenza i-cone yekhadibhodi, njengakuzo zonke izinketho ezichazwe ngenhla. Ukumboza ngephepha eliluhlaza, usike imichilo kuyo. Kutholakale umuthi onjengoKhisimusi othakazelisayo uma unamakhasi amaphepha ephepha kanye nemigqa yemikhiqizo ye-confectionery, kancane kancane ugcwalisa yonke imishini.
Ungenza umuthi owenziwe ngephepha elibiziwe namaswidi kunoma iyiphi indlela echazwe ngenhla. Sebenzisa amaswidi njengomhlobiso noma uwabeke esihlahleni, uhlaziye imigqa yezakhi zephepha. Emaswidi, akunzima ukwenza izimbali ngokuzifaka ngephepha elibiziwe nokwenza amacembe. Uma ufisa, ama-inflorescences anjalo angakwazi ukubeka yonke i-cone-base - uzothola isihlahla sikaKhisimusi esimnandi kakhulu nesimnandi.
Indlela yokwenza ikhampasi ngezandla zakho?